Soo saaraha qalabka keydka endoskobi ee gacanta ugu fiican elektromagnetic Qalabka gacanta iyo Warshad | Fepton
Buugga korantada elektromagneticKalka ku xiran shaashadda endoscopy
Nooca: Endoscopy pendant
Qalabka loo yaqaan 'endoscopy pendant' waxaa loo isticmaalaa in lagu qaado qalabka sida endoscopes, insufflatorer, electrotomes, rikoorro, kormeerayaal, iwm, si kor loogu qaado dhaqdhaaqa dhaq dhaqaaqooda, iyo in la helo ilaha hawada, korontada, isgaarsiinta xogta, iyo isdhexgalka fiidiyowga. Waxay ku qalabeysan tahay fiilooyin / tuubbooyin si loo ilaaliyo qalabka iyo fiilada si loo hagaajiyo socodka shaqada, loona kobciyo jawiga shaqada. Maaddaama oo la raacayo tirada badan ee qalabka, endoscopy pendant waa culeys culus oo culus oo leh awood culeys xoog leh, oo ay ku qalabaysan yihiin qalab ballaadhan oo badan, awood ku filan iyo boosteejada gudbinta xogta. Dhanka kale, waxaa lagu rakibi doonaa hawo farsamaynta iyo nidaamyada gaaska gaaska.
Jirka dogobku wuxuu ka samaysan yahay aluminium awood badan leh oo dhererkiisu yahay: 600-1000mm
SS mashiinka faleebada faleebada 4 kumbiyuutar dhererka faleebada faleebada laysku hagaajin karo 1 kumbiyuutarro hal fidin ah oo isku dhafan oo isku dhafan
4pcs SS faamka meeriska mashiinka Dhererka jillaab hagaajin karo 1 kumbiyuutarada labalaab gacan wadajir kordhin
Liistada HM 3100 Hal Gacmood Saqafka u sudhan Isticmaalka Qalliinka, Suuxdinta & Isticmaalka Endoscopy.
Farqiga ayaa ku jira qaababka yaryar.
Waa tan liiska tixraacaaga.
* Ogeysiis: Haddii aad rabto inaad ku darto qaybo kale oo ikhtiyaar ah sida Tray, Khaanad Is-nuugis ah * 1pc, Nooca wadajirka ah ee isku-dhafan ama nooca isku-dhafan ee isku-dhejiska ah ee gacmaha la dheereeyey * 1pc, Qalabka faleebada faleebada biraha ah * 1pc, Birta birta ah ee birta ah ee aan xarka lahayn * 1pc
Waan raaci karnaa tilmaamahaaga si aan adigana wax ugu soo saarno.
HM 3100 endoscopy suunka caafimaad
O2 * 1, Hawo * 1, Vac * 1, CO2 * 1 N2 * 1
Socket Power * 6
khaanadaha qalabka * 2 (dhererka la hagaajiyay)
S: Sideen u rakibaynaa qalabka ka dib iibsiga?
J: Waxaan bixinaa fiidiyoow rakib ah oo xirfad leh si aan u muujino.
S: Sidee ku hubinaysaa in badeecadu leedahay tayo sare?
J: Waxaan haysanaa shahaadada CE iyo ISO. Waxaan sidoo kale haynaa warbixin wax soo saar / kormeer intaadan xirxirin.
S: Calaamadeena ma ku dhejin kartaa alaabta?
J: Gabi ahaanba haa oo wata macluumaad faahfaahsan sida astaan. Waxaan ku tusi doonaa sawirrada astaantaada alaabta ka hor intaadan xirxirin.
S: Miyaad aqbashaa adeegga OEM (Soo-saaraha Qalabka Asalka ah)?
J: Haa. Waxaan aqbalnaa adeeg kasta oo OEM ah maadaama aan nahay soo saare xirfadle ah oo loogu talagalay qalabka caafimaadka oo leh in kabadan 10 ilmo oo khibradaha OEM ah.
Hore: Manualelectricelectromagnetic hal suuxdinta suunka
Xiga: Buug gacmeedka korantada gacanta ee korantada gacanta